Erdogan"Madaxda galbeedku ha kala doortaan inay ixtiraamaan Turkey ama argagixisada" - Horn Future
Ankara (Horn Future)-Madaxweynaha Turkey Rajap Dayyip Erdogan ayaa sheegay in “madaxda dalalka reer galbeedka ay kala doortaan mar kale inay ixtiraamaan bulshada Turkey ama ay sii wadaan inay la jiraan dhinaca argagixisada,”.
Tani ayaa waxay timiday maqaal uu ku qoray madaxweynaha Turkey wargayska “Guardian” ee British ka ah maanta oo Sabti ah oo kusoo beegantay xuska sannad guurihii koowaad ee isku daygii afgambigii ee guul-daraystay ee ka dhacay dalkaasi.
Erdogan ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay maqaalkiisan oo uu yidhi “ma jirto marmarsiiyo lagu khiyaano saaxiibtinimada Turkey, kaas oo ah hab dhaqan aanan istaahilin qiyamka aasaasiga ah ee xidhiidhka laba geesoodka ah waddamada reer galbeedka,”.
Waxa kale uu carabka ku adkeeyay in bulshada Turkey qaybahooga kala duwan ay difaaceen dimuqraadiyadda oo ay ka hortaggeen kuwii ka dambeeyay shirqoolka afgambigan kuwaas oo beegsaday distuurka,rasaasna ku furay dadka rayidka ah ee aanan waxba galabsan oo duqeeyay baarlamaanka.
Waxa Erdogan uu sheegay in dadka ay hortaggeen koox hubaysan oo isku dayday inay burburiso dimuqraadiyada, xorriyada iyo inay hannaanka nooloshooda ku afgambiyaan,halkaas oo la dilay 250 qof laguna dhaawacmay 2193 oo kale.
Erdogan ayaa waxa uu ku tilmaamay fashilintii isku daygii afgambi inay ahayd “dhibic kala guur ah oo ah taariikhda dimuquraadiyadda,”waxana uu sheegay in dhacdadan ay noqon doonto il rajo u leh dadyowga dunida ee xorriyadda-jecel.
Dhinac kale Erdogan ayaa sheegay in asxaabtoodu gaar ahaan reer Galbeedku ay ku guuldareysteen inay ixtiraamaan dhacdooyinkan in ku filan,waxana ay qaateen buu yidhi qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka iyo ururadooda dawliga ah istaraatijiyada ah ‘sug oo daawo’halkii ay midnimo u muujin lahaayeen muwaadiniinteena,kuwaas oo ka hortagay afgambigan.
Madaxweynaha Turkey ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in “laba-wejiilenimadu iyo heerarka dhinaca u janjeedha ee ay raaceen dalalka reer galbeedka iyo ururada dawliga ah ee Galbeedku ee ku saabsan isku daygii afgambi kadib ay aad uga xanaajiyeen dadkiisa kuwaasoo u huray wax kasta oo ay haystaan xorriyadda daraadeed,”.
Maqaalkan Erdogan uu qoray ee lagu faafiyay wargayskan ayaa waxa uu kusoo beegmaya sanad guurihii kowaad ee kasoo wareegay isku daygii afgambi ee guul-daraystay kaas oo ka dhacay magaaladda caasimadda ah ee Ankara iyo Istanbul 15 July 2016 ee kal hore.
Waxa isku daygan afgambi ku kacay xubno kooban oo kamid ah ciidamada oo ahaa taageersayaasha ururka wadaadka suufiga ah “Fatxullah Gulen”, kuwaas oo isku dayay inay qabsadaan xarumaha ammaanka ee dawladda iyo waahaxa warbaahinta.
Waxa isku daygan afgambi uu kala kulmay bulshada Turkey dibadbaxyo aad u balaadhan oo lagaga soo horjeedo falkan kuwaas oo ka dhacay guud ahaan gobolladda Turkey,iyada oo muwaadiniin sida daadka u qulqulaysa oo aad u tiro badan ay u dhaqaaqeen dhismaha baarlamaanka,agaasinka guud ee gaashaan-dhiga ee caasimada, gegeda diyaaradaha caalamiga ah ee Istanbul, iyo xarumaha ammaanka oo kuyaala tiro ka mid ah magaalooyinka,taas oo ku qasabtay gaadiidkii ciidan ee la geeyay agagaarka goobahan inay ka baxaan,waxana tallaabadani ay aad gacan uga gaysatay guul-daradii afgambigan la qorsheeyay.
Waxa xusid mudan in shirqoolka afgambigan ay ka dambeeyeen dalalka reer Galbeedka iyada oo lagu fuliyay hanti laaluush ah oo ay bixiyeen qoysaska maamulo imaaradaha Gacanka Carbeed gaar ahaan Imaaraadka Carabta oo iyada la xaqiijiyay inay ku bixisay(3 $ billion) milyaar oo dollar sida lagu faafiyay qaar kamid ah warbaahinta reer Galbeedka.
Kooxaha soo abaabulay afgambigan ayaa waxay damacsanaayeen in shirqoolkii lagu riday madaxwaynihii Masar ee lasoo doortay mid lamid ah lagu rido xukuumadda uu madaxa ka yahay xisbiga talada haya ee Cadaaladda iyo Hore-umarka ee( AK Party) oo isagu u horseeday hore-umara dhinac walba ah dalka Turkey kana saaray dabo-socodkii reer Galbeedka, gaadhsiiyayna inuu noqdo mid kamid hormoodka caalamka mudada uu xilka hayo.
Guulahan uu gaadhay xisbigan oo aragtidiisu ay salka ku hayso Islaam oo is-waafajiyay hore-umarka iyo dimuqraadiyada ayaa waxay dhul-gariir iyo daacuun faafaya ku noqotay dalalka reer Galbeedka,kaligood-taliayaasha Carabta iyo qoysaska maamula imaaradaha kuyaala Gacanka Carbeed.
« Guumaysiga Isra’iil oo maalintii labaad oo xidhiidh ah si buuxda u xidhay Masjidka Al-Aqsa	» NY:Iran Dominates in Iraq After U.S. ‘Handed the Country Over’